फोटोमै दंग रेखा
अभिनेत्री रेखा थापा पर्दामा नदेखिएको पनि लामो समय भयो। पछिल्लो समय रेखाले नै निर्देशन गरेको ‘मालिका’मा उनी देखिएकी थिइन्। त्यसपछि रेखा फिल्महरुमा खासै देखिएकी छैनन्। उनले फिल्म पाउन छोडेकी छन्।
प्ले ब्वाई ? नो टेन्सन !
केही समयअघि एक अन्तरर्वार्तामा एक अभिनेत्रीले आर्यन सिग्देललाई प्ले ब्वाई भनिदिइन्। आर्यनलाई यसको रत्तिभर चिन्ता छैन। बरु उनको चिन्ता त लामो समयपछि आएको फिल्म ‘हजार जुनीसम्म’बाट आफ्नो क्रेज फर्काउला कि नाइँ भन्नेमा छ।
साम्राज्ञीको साडी मोह
कहिले बोल्ड त कहिले बिकिनीमा देखा पर्ने अभिनेत्रीको साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह यस पटक भने साडीमा सजिएर कार्यक्रमा आएपछि सबैजना चकित भए।
पाकिस्तानी अभिनेत्री मेहविश हयातले हलिउड र बलिउडका फिल्महरूले पाकिस्तानको बदनाम गरेको आरोप लगाएकी छिन्। नर्वेको राजधानी ओस्लामा ‘प्राइड अफ पर्फमेन्स’ अवार्ड लिँदै उनले हलिउड र बलिउडका फिल्महरूले पाकिस्तानको बदनाम गरेको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।
कहिले हाई हाई, कहिले नाई। जीवनचक्र यस्तै त हो। हिजो श्रीमान् निर्देशक छ, उसैको भरमा त फिल्ममा टिकेको हो भन्नसमेत बाँकी राखेनन् उनलाई। प्रायः सोलो फिल्म पनि थिएनन्।
इन्स्टामा हिट, पर्दामा फ्लप
अब अर्काको शरीरको के कुरा गरेको भन्ने होलान् तर के गर्नु त हो? सेलिब्रिटीको बान्कीको हल्का चर्चा गर्नु नै प-यो। अझ जसले चर्चाका लागि अभिनयमा भन्दा देह दर्शनलाई नै बढी उपयोग गर्छन्, अब उनीहरुको अभिनयको मात्र चर्चा कसरी होस् ? नपत्याए साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहलाई नै हेरौँ न।
अभिनेत्री दिया मास्के क्याजुअल र ट्रेन्डी ड्रेसअपमा देखिन मनपराउँछिन्। प्रायः जिन्स पेन्ट र टप्समा देखिन मनपराउँने उनी पारिवारिक जमघटमा भने साडीलाई प्राथमिकतामा राख्दछिन्।
एउटा जँड्याहा छतबाट तल खसेछ। सबैजना ऊ भएतिर आए र सोधेः के भयो ? उसले जवाफ दियो, ‘खै ? मलाई के थाहा ? म त भर्खर आउँदैछु।’
लक सधैँ कहाँ लाग्छ र ? हेर्नुस् त हाम्री हिरोइन आँचल शर्मालाई ! कुनै समय क्या प्याक थियो उनको सेड्युल ! म्युजिक भिडियोमा उनकै डिमान्ड ! फिल्ममा उनी नै हिट ! बजारमा उनकै तानातान। तर अहिले भने लुँडो खेलेर बस्नुप-या छ। म्युजिक भिडियोमा अरुकै कब्जा !
योजनाकाे चुले निम्तो
गायिका योजना पुरीले आफ्नो नयाँ तीज गीत सार्वजनिक गरेकी छन् ।
बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपुर र प्रभासको ‘साहो’ र निर्देशक नितेश तिवारीको नयाँ फिल्म ‘छिछोरे’ आगामी अगस्ट ३० मा रिलिज हुने भएको छ। दुई फिल्मको मुख्य अभिनेत्री भने श्रद्धा कपुरलाई यत्तिखेर तनाव सुरू भएको छ।